ထရိတ်ဒါ ပါတီ: ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှ အမှတ်တရများ
၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ရက်တွင် အကြီးဆုံးသော ထရိတ်ဒါပါတီကြီးကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၉နှစ်ပြည့်ပွဲကိုပါ တပြိုင်နက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်. ပါတီပွဲကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Surabayaမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး တက်ေ၇ာက်လာသူဧည့်သည်များ အားလုံးအတွက် တစ်သက်မမေ့နိုင်မည့် ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်. တက်ေ၇ာက်လာသူများမှာ ၂၅၀ကျော်ခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများ၊ ဆုလက်ဆောင်များ၊ သရုပ်ပြတင်ဆက်မှုများနှင့် အားလုံးအတူတကွ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်. FBSမွေးနေ့ပါတီ၏ အကောင်းဆုံးအမှတ်တရများကို ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်..
ပျော်ရွှင်ဖွယ် အစီအစဉ်များကို ပါတီအ၀င်နေရာကတွင်ပင် အစပြုပြီး ဧည့်သည်များသည် FBSတံဆိပ်ပါ အမှတ်တရလက်ဆောင်များ၊ ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များကိုရရှိခဲ့ကြပီး၊ ဆယ်ဖီလ်ဆွဲခြင်း၊ silhouetteပုံဆွဲပေးခြင်းများ၊ ရိုးရာအကများကို ခံစားကြည့်ရှုပြီး၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို သုံးဆောင်ကာ အချင်းချင်းမိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ခဲ့ကြပါသည်.
ပါတီအား ပျော်ရွှင်စရာညစာစားပွဲ၊ ခေတ်မီအကနှင့် ရိုးရာဂျပန်ကပွဲနှင့်၊ ပါတီအစီစဉ်မှူး Daniel Mananta ၏နုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြင့် ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ FBS CEO၏ ကြိုဆိုမိန့်ခွန်းသည် အဓိကသဘောကျစရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ - မမျှော်လင့်ဘဲ သူ့မိန့်ခွန်းကို အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားဖြင့် ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့နောက်မှ မစ္စ Yulia Ivanovaသည်လည်း ဧည့်သည်များအား အင်ဒိုနီးရှားလိုနုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး - တကယ့်ပျော်စရာက ဒီမှာ စတာပါ။
ပါတီပွဲကျင်းပခဲ့သည့် ညတွင် ဧည်သည်တော်များအတွက် အကောင်းစား ထိပ်တန်း Apple နှင့် Samsung ပစ္စည်းများအပါအ၀င် အမှတ်တရလက်ဆောင်များစွာကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်. Cak Lontong၏ (သူက ဟာသအလွန်ပြောတတ်လို့ အလွန်လူသိများ) ဖျော်ဖြေတက်ဆက်မှုများကို ကြည့်ရှုကာ ဧည်သည်တော်များအနေဖြင့် အားရပါးရ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရပြီး၊ Marcel Siahaanနှင့် သီချင်းများကို လိုက်လံသီဆိုခဲ့ကြကာ Krisdayantiနှင့်အတူ ကခဲ့ာ့ပြီး အတူဆယ်ဖီလ်ဆွဲကာ၊ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းများကစားကာ FBSရဲ့ ၉နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အလွန်လှပသည့် မွေးနေ့ကိတ်ကြီးကို လှီးခဲ့ကြကာ ဂုဏ်ပြုမွေးနေ့ဆုတောင်းများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်!
ပါတီပွဲတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာဗားအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Malangမြို့လေးမှာနေတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ပြိုင်ပွဲဆုရှင် Mr. Fanny Setiaအကြောင်း ဗွီဒီယိုကို ပြန်လည်ပြသခဲ့ရာ အားလုံးခံစားခဲ့ကြရပါသည်. Mr. Dennisမှ Fanny Setiaအား စတိတ်စင်ပေါ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ကာ အမှတ်တရလက်ဆောင်တစ်ခု ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်.
ကျေးဇူးပါ, အင်ဒိုနီးရှားရေ, တကယ့်ကိုပျော်စရာညလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်!